Toamasina : tafakatra 2.800 Ar ny kilaon’ny vary | NewsMada
Toamasina : tafakatra 2.800 Ar ny kilaon’ny vary
Lazain’ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana fa tokony ho vary amin’ny kaontenera 120 hatramin’ny 150 no hafaran’ny mpandraharaha iray, mba hidinan’ny vidim-bary fa tsy iray na 10 fotsiny.
Tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary eto Toamasina. Tafakatra 2.800 Ar ny kilaon’ny vary avy eto an-toerana, ary 2.000 Ar ny vary hafarana avy any ivelany. Nidina ifotony ary nahita ireo ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine, ny herinandro lasa teo. Avy eo, nihaona tamin’ny mpandraharaha amin’ny vary ny tenany. Hentitra ny nilazany fa “maitsoahitra isika izao ka tsy vahaolana ny fampiakarana ny vidim-bary. Raha tena mpandraharaha, tsy tokony ho kaontenera iray na 10 fotsiny ny vary hafaranareo mpandraharaha fa tokony ho sahy hanafatra hatrany amin’ny 120 na 150 kaontenera, isaky ny herinandro, isaky mpandraharaha. Koa, aoka hidina sy hampidina an’io vidim-bary io ny tsirairay mandraharaha vary“.
Tsy izao vao nisy fidinana ifotony
Raha iverenana, tsy sambany ny fidinana tompon’ andraikim-pajakana tonga eto Toamasina, niresaka mivantana tamin’ny mpandraharaha, hampidina ny vidim-bary. Anisan’izany ny praiminisitra, ny 11 marsa lasa teo.
Tsikaritry ny minisitra fa maro ireo mpivarotra minia tsy mametraka ny vidin-javatra, na didin’ny lalàna aza izany. Midika izany fa tsy manara-dalàna ny mpivarotra eto Toamasina fa zatra gaboraraka sy mihevitra manao izay tiany.
Nahita delestazy ny minisitra
Nahita maso ny fahatapahan-jiro koa ny minisitra. Tapaka tamin’ny 9 ora maraina ny jiro ary tsy tafaverina raha tsy tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro. “Izao ny mahazo anay aty”, hoy ny mpivory. Vokany, voatery nampiasa gropy.